Ike nke Infographic Marketing ... Na Wardọ Aka ná Ntị | Martech Zone
Akwụkwọ a na ọtụtụ ọrụ anyị na-arụrụ ndị ahịa gụnyere ọdịnaya anya. Ọ na-arụ ọrụ… ndị na-ege anyị ntị etoola nke ukwuu na-elekwasị anya na ọdịnaya na-ahụ anya ma anyị enyekwara ndị ahịa anyị aka ịbawanye iru ha na ọdịnaya anya akụkụ nke ngwakọta.
Nke a na infographic na Market na-achị achị Media kere iji gosipụta ike nke ọdịnaya anya. Ọ bụghị ihe nzuzo na ndị na-azụ ahịa na-azaghachi nke ọma na ahịa a na-ahụ anya, nke a bụ otu ihe kpatara na infographics abụrụla ụdị ewu ewu na ịre ahịa n'ịntanetị. Ha na-enye gị ohere iweta ozi n'ụzọ ndị na-ege gị ntị ga-anabata ozi gị n'ezie, kama ị gafere site na ederede ederede naanị chekwaa pasent ole na ole nke ozi ahụ.
Ihe Nlekọta Ọdịnaya Anya
Ihe omuma ihe omuma dika ihe omuma ihe di nkpa nye ihe atụmatụ ọdịnaya dị irè ma ọ bụrụ naanị na e gosipụtara ha n'elu ikpo okwu kachasị mma nke na-enyere aka ịkwanye njikọ miri emi na ohere maka mgbanwe. Gịnị ka m na-ekwu?
Ederede metụtara ya zuru ezu nke na ị ga-enyere ọdịnaya ihe anya gị aka họọrọ site na engines ọchụchọ? You'll ga-achọpụta na anyị na-ejikọ ederede ihe ọmụma anyị na ederede ederede. Nke ahụ bụ ka igwe nchọta ahụghị peeji ahụ dịka ọkụ na ọdịnaya ma eleghara ya anya na ogo. Ọ bụ ezie na infographics na-enwekarị ọtụtụ ọdịnaya, Google anaghị edepụta ọdịnaya ahụ n'ime ihe ọmụma, ha na-ele ọdịnaya gbara ya gburugburu. Matt Cutts ọbụna dọrọ aka ná ntị afọ ole na ole gara aga na njikọ na ewu ewu nke infographics nwere ike iwepu ya site na igwe nchọ (IMO, nke ahụ ga-abụ nzuzu ma enwere m obi abụọ na ọ ga - eme).
Enwere kpọọ ka eme na infographic? O zughi naanị ịgụ infographic ma hụ akara ngosi nke onye mere ya, kedụ atụmatụ ị ga-eji duru onye na-agụ ya gaa nzo ọzọ na usoro ịzụta? Anyị na-ahapụkarị infographics iji kwalite ọdịnaya miri emi dị ka akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ iji kpalite ụdị ndebanye aha na saịtị ndị ahịa.
Enwere peeji nke ọdịda na-enye na CTA ga-ebugharị okporo ụzọ? Enwere akwụkwọ ndenye aha iji debanye aha ndị na-agụ maka email ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ? Enwere ederede ma ọ bụ ihe ọmụma ndị ọzọ metụtara ya na ibekọrịta na peeji nke ọdịda ka ị wee nwee ike ịkwọ onye na-agụ ya nke ọma?
Kedu ka ị mere atụ mmetụta nke ọdịnaya a na-ekerịta? Anyị anaghị echegbu onwe anyị na idetuo na mado ederede a igbe dị n'okpuru infographic nke na-anwa ịmanye backlink. Site na CTA anyị na infographic ahụ, anyị na-ejikarị njikọ njikọta ihe dị ka Bit.ly nke na-enyere anyị aka ịlele ọrụ kpọmkwem nke infographic ahụ mepụtara.
Olee otu na mgbe ino na-akwalite infographic? Anyị na-ekesa anyị infographics anyị ahịa na a odida obodo PDF usoro na bara uru maka Slideshare na anyị na-akwalite infographic na ntanetị niile nke ndị ahịa, ọwa mmekọrịta anyị, ma nwee ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze na-etinye ihe ọmụma ahụ na saịtị dị mkpa. Okike nke infographic ezughị, ị ga-enwerịrị usoro nkwado. Anyị ga-akwalite ya ugboro ugboro… ọ bụghị naanị otu mkpọsa.
Ihe omuma ihe a na akowa ihe mere ihe omuma ji di nma, ndi ozo, ma kwenye. Ọ na-ekwu maka ihe ịga nke ọma nke atụmatụ infographic na ihe kpatara azụmahịa gị kwesịrị iji tụlee ahịa azụmaahịa. Infographic marketing bu ihe di egwu nke icho mma, ma i gha aghaghi inwe uzo ozo idebe ma gbanwee okporo ụzọ ị na-adọta!
Tags: DK New Mediaahịa infographicinfographic nkwaliteatụmatụ infographicihe omuma ihe omumamgbasa ozi na-achịkwa ahịaInfographics Ahịaọdịnaya anya
Etu esi eji Social Media Enyemaka Gị